Indlela yokwenza skrini kwesikrini kukhompuyutha ephathekayo? Umhlahlandlela kufinyeleleke
Ngokuhamba kwesikhathi abasebenzisi computer ekhaya, ama-laptops, futhi netbooks ibhekene nesidingo "ukuthatha isithombe" isikrini. Futhi thatha izithombe ngaphandle kwamanye amadivaysi, kuphela yi-qapha. Kuzwakala sengathi uma gibberish? Noma kunjalo, kungenzeka! Lokhu esesithombenesi kuthiwa skrini noma izithombe-skrini. Isidingo ke kuphakama ngenxa yezizathu ezihlukahlukene. Kule ndaba, ukwazi indlela yokwenza skrini isikrini ephathekayo, kufanele wonke umsebenzisi PC, kungakhathaliseki isipiliyoni, ubudala nobulili.
Kukhona kuphela ngezindlela ezimbili - ngokusebenzisa esakhelwe izinhlelo Windows nezinqamuleli, noma ngokuletha Izinsiza third-party. Indlela yokuqala - elula futhi eqotho. Kungani? Ngoba ngaphambi kokuba kudalwe, indlela yokwenza skrini kwesikrini kukhompuyutha ephathekayo, kudingeka nje enze uchungechunge lwezinguquko ukuchofoza elula. Eyesibili kancane kuyinkimbinkimbi futhi kudinga amakhono akhethekile usebenzisa izinhlelo sokuqhafaza, ikhono ukulanda Umbuso kusukela kuwebhu nokufunda ngesiNgisi bonke amaphuzu hlelo. Kungani? Ngenxa ezinhlelweni eziningi walolu hlobo uvezwa ngesiNgisi. Nakuba zikhona abamele ehloniphekile Russified abazi izimiso komsebenzi-skrini. Isibonelo, lokhu Screen sevidyo 2.5.20.211. A inguqulo yalesi Umbuso Russian hhayi kuphela, kodwa futhi mahhala (kwezinye izinsiza, "shareware"). amakhono aso angamazinyo olubanzi, tshela hhayi kuphela wena indlela yokwenza skrini kwesikrini kwi laptop, kodwa futhi ikwazi ukuqopha ividiyo ibhekwe. Bhekana nalo uzokwazi nasezinganeni novice.
Uma kungekho isifiso ukulanda isofthiwe eyengeziwe, ungakwazi ukusizakala ngalokho iyatholakala ku-Windows. Lokhu kuyinto elula isithombe umhleli - Paint. ngokwakhona, itholakala kuzo zonke izinguqulo software. Indlela yokwenza skrini kwesikrini phezu laptop ngosizo Paint? Kulula: uvula idokhumenti, indawo noma isithombe ofuna "ukuthatha isithombe". Wena inkinobho on ikhibhodi «Sukumani Nonke Sc - Sys Rq». Uma! Ngokulandelayo, vula isihleli sakho bese ucindezela inkinobho "Faka". Uma umuntu akakwazi ukubona, ngeke inhlanganisela «Ctrl» ukhiye bese «V». "Isithombe" lakho lizovula kumhleli. Kwenziwe ngayo, ungakwazi yini oyifunayo. Okubalulekile, ungakhohlwa ugcine kamuva. Okubalulekile: wenza "isithombe" ka isikrini sonke! Lokhu kusho ukuthi konke oyibona qapha izoboniswa esithombeni ngezansi. Uma udinga uthwebule kuphela endaweni screen ukuthi ngqo obala, kubalulekile ngaphezu inkinobho «Sukumani Nonke Sc» cindezela futhi ukhiye «alt». Ngeshwa, le ndlela sincane kakhulu. Nge kunzima ukwenza izikrini eqondile kakhulu.
Indlela ukuthatha skrini ku Samsung laptop? njengoba kunoma iyiphi enye nje. inkinobho adingekayo iyatholakala kwi ikhibhodi nganoma iyiphi imodeli laptop noma netbook. Itholakala ngokuvamile ekhoneni elingenhla esinxeleni kwekhibhodi. Uma kuphakama isidingo ukwenza esibukweni kaningi, kungcono ukulanda Umbuso indawo ekhethekile. Izinzuzo ukusetshenziswa kwalo zisobala - izici eziningi, ubulula lula. Ngaphambi kokwenza skrini kwesikrini kwikhompyutha laptop, ukuvula ifayela ofuna zaskrinit. Sebenzisa izinhlelo kuphela mahhala amagciwane futhi hhayi ngaphansi izinsongo zokuvikela ku-PC yakho!
I-Laptop Toshiba Isethelayithi: i Uhlolojikelele, Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Indlela ukukhetha laptop, eqondiswa izici zayo
I-Laptop Asus X53S: Ukucaciswa
I-Laptop Asus N53S: ukubuyekezwa, Ukucaciswa
HP inkundla Laptop 15: izici kanye nokubuyekeza. Indlela ukuqaqa laptop HP inkundla 15?
Coefficient ngokuhambisa ukuxabana futhi kweqa
Izintwala e amakati - eziyingozi isifo yisinanakazana
Sibhedlela "Revital Park": lobuya abasebenzi kanye neziguli
Jamu owomile wama-apula kuhhavini: izici zokupheka, zokupheka nokubuyekezwa
Ukuthenga isikhungo "Juni", Mytishchi ikheli, izitolo, ukubuyekezwa
"Emathangini avuzayo amane inja": nabalingisi izindima. Polish uchungechunge TV
Kuthiwani uma isobho anosawoti omningi kakhulu: amathiphu
Umlando kwezokuvakasha: kusukela ezikhathini zasendulo kuze kube namuhla
Museum of Siege of Leningrad. ISikhumbuzo Museum Wezokuvikela kanye Siege kweLeningrad
Shoes nge spikes - imfashini stylish